BURMA: Online News & Analysis: November 2016
စီပိုး - Hep C ( သို့ ) Silent Killer
(This post is dedicated to thousands of people including my best friends who died from liver cancer)
ခန္ဓာကိုယ် ထဲရှိ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေထဲ မှာ အသည်း က အကြီုးဆုံး နှင့် အလုပ် လုပ်ရဆုံး အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်။ စားသောက်တဲ့ အစားအစာများ မှတဆင့် ပရိုတိန်းဓာတ်ကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး၊ လိုအပ်သည့် နေရာ၊ လိုအပ်သည့် အချိန်တွင် အဟာရ အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသလို၊ အစား အသောက် ထဲတွင်ပါဝင်သည့် အန္တာရယ်ဖြစ်စေသည့် ဓာတ်များ ကို ဖယ်ရှားပြီး သွေးကို သန့်စင်မှု ပြုလုပ်ပေးသည့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ အရပ်စကားနဲ့ ပြောရရင် - အသည်း ဟာ ကား တစီးလို ပါပဲ။ မောင်းရတာ များလေလေ (သို့) ကားဟောင်း သွားလေ၊ ကားဟာ ချွတ်ခြုံကျ လာလေလေ၊ ပျက်စီးဖို့ များလာလေပဲ။ ကိုယ့်ကားကို အမြန်ဆုံး ချွတ်ခြုံ ကျမသွားအောင် ၊ ကြာရှည်ခံအောင် ထိမ်းသိမ်းယုယဖို့ ၊ ထိခိုက် မပျက်စီးစေအောင် ဂရုစိုက်ဖို့ တော့ လိုပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အလုပ် လုပ်ရဆုံး အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တဲ့ အသည်း ကို ကြာရှည်ခံအောင် ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ညီညွတ် စွာ နေထိုင် စားသောက် ပြီး ၊ဂရုတစိုက်ရှိ ကြ ဖို့ အသက်ကြီးငယ်မရွေး၊ လူတိုင်းကို အကြံပြုပါရစေ။
အသည်းရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများရဲ့ အဆိုအရ၊ သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံ က နေ ရရှိသည့် enzymes များဟာ ခန္ဓာ ကိုယ်အတွင်း အဆိပ်၊ အညစ်အကြေးများ ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး၊ သွေးသန့်စင်ပေးဖြင့် အသည်း အလုပ်လုပ်နေရမှု ကို လျော့ ကျစေကာ၊ အသည်း ကို ကြာရှည်ခံ စေတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ထို့ အတူ အသားများ၊ ဓာတုဗေဒ အဆိပ်သင့် အစားအစာများ စားရင်တော့ အသည်း က ပိုမို အလုပ်လုပ်ရသဖြင့် အသည်းပျက်စီးမှု ကို ပိုမိုလွယ်ကူစေ တယ် လို့ အကြံပေး ထောက်ပြပြောဆိုကြတယ်။ ဆိုလိုတာ က ရေများများ သောက်သည့် အလေ့အထ၊ သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်သည့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံ စားသုံးသည့် အလေ့အထ၊ အဟာရ ပြည့်ဝသည့် အစားအစာ စားသုံးသည့် အလေ့အထ၊ ကူးစက်ရောဂါ မပြန့်ပွားအောင် ကာကွယ်ရေး ပညာပေးသည့် အစီအစဉ်များ ကို လုပ်ငန်းခွင် ရှိ ၀န်ထမ်းများ အား လေ့ကျင့်ပေးသည့် အလေ့အထ၊ အပါအ၀င် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူနေမှု ပုံစံ ( Life Style) များကို ပြောင်းလဲပေးစေခြင်းဖြင့် အသည်းပျက်စီးမှု၊ အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှု ကို လျော့ကျလာစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
အသည်းကို ဘာကြောင့် ဂရုစိုက်သင့်သလဲ?။
အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်စေတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ စီပိုး( ခေါ်) Hep c ကို တချို့ က Slient Killer လို့ ခေါ်ကြတယ်။ တကယ်ပဲ စီပိုးဟာ HIV လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကျ ကူးစက်ရောဂါထက် ဆိုးဝါးတယ်။ ပိုမို ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု လွယ်သလို၊ သေဆုံးမှု ရာခိုင်နှုန်းလည်း များတယ်။ စီပိုး ကူးစက် သွားပြီဆိုရင် ဆေးဝါးကုသမှုလည်း မလွယ်၊ ဆေးဝါး က လည်း ဈေးကြီးမြင့်ပြီး၊ ရှားပါးတာကြောင့်၊ အင်မတန် မှ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုးဟာ သွေးကနေ တဆင့် အသည်းကို ရောက်သွားပြီး ရောဂါပိုးတွေ ပွားများ လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Hep C ရောဂါပိုးဟာ နာတာရှည် ရောဂါကို ဖြစ်စေပြီး လူကို သေတဲ့ အထိ ဆိုးကျိုးပေးတယ်။ အသည်း အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ အဆိုအရ၊ တခါတရံ ကူးစက် ခံရပြီးပြီးခြင်း မသိဘဲ နှစ် ၂၀၊ နှစ်၄၀ ကြာမှ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကျလာတဲ့ အခါတွေ မှာ ရုတ်တရက် သိရှိ ရတာတွေ၊ သွေးအန်မှ သိကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အသည်းပျက်စီးနေမှု၊ အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်စေတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ စီပိုး( ခေါ်) Hep c ကူးစက်ခံခဲ့ရမှု ကို အချိန်နှောင်း မှ သတိပြုမိ လေ့ရှိကြတယ်။
အမေရိကန် နှင့် Hep C
အမေရိကန်နိုင်ငံ မှာ Hep C အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကူးစက် ခံစားနေရသူ ၃. ၂ သန်းကျော် ရှိပြီး၊ တကမ္ဘာလုံး မှာ သန်း ၁၇၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က ထုတ်ပြန်တဲ့ မှတ်တမ်းတွေ မှာပါရှိပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံ မှာ Hep C အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး နှင့် သေဆုံးသူ ဦးရေ ဟာ တနှစ် ကို ပျှမ်းမျှ ၁၂, ၀၀၀ ရှိပြီး၊ ကူးစက်သူ အသစ် ဦးရေ က တော့ တနှစ် ကို ၁၇, ၀၀၀၀ တိုးပွားလာနေတယ်လို့ အမေရိကန် ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဗဟို ဌာန က ဆိုတယ်။ Hep C အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကူးစက် ခံစားနေရသူတွေရဲ့ ၇၅ % ဟာ မိမိ တို့ရဲ့ အသည်းပျက်စီးနေတာတာ ကို သေခါနီး ချိန်ထိ မသိရှိကြ၊ သတိ မထားမိကြဘူးလို့ အမေရိကန် ဗဟို ရောဂါထိမ်းချုပ်မှု နှင့် ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့- က ထုတ်ပြန်တဲ့ သုတေသန စစ်တမ်းထဲ့ မှာ ဖော်ပြထားတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပြီလို့ သိရှိတဲ့ အချိန်မှာ ကူးစက်ရောဂါ ဟာ ကျွမ်းသွားပြီး၊ ကုသ လို့ မရတော့ တဲ့ အဆင့် ကို ရောက်ရှိ သွားတက်ကြတယ်လို့ ဆိုတယ်။
အမေရိကန် ဗဟို ရောဂါထိမ်းချုပ်မှု နှင့် ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့- CDC (Centers for Disease Control and Prevention) နှင့် အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ က တော့ ၁၉၄၅-၁၉၆၅ ကြား မှာ မွေးဖွားလာသူတွေ ဟာ အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကူးစက်ခံရမှု၊ အသည်းပျက်စီးမှု အန္တရာယ်များတာကြောင့် သွေးစစ် စမ်းသပ်ခံယူကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အမေရိကန် အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ က အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ အသည်း ပျက်ဆီးမှု မရှိအောင်၊ ရှောင်သင့်သည့် အချက်( ၅) ချက် ကို ထောက်ပြထားတယ်။
 ၁) အရက် အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်း၊ (Drinking too much alcohol over time can be devastating to the liver.)
 ၂) အရက်နာ ကျသည့် အခါ Tylenol အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ကို သောက်သုံးခြင်း၊ Tylenol တွင်ပါဝင်သည့် acetaminophen ဓာတ်တမျိုး သည် အသည်းကို ပျက်စီးစေခြင်း။ (Taking too much acetaminophen (main ingredient in Tylenol) can also hurt the liver.)
 ၃) စီပိုးသည် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ လိင် ဆက်ဆံခြင်း၊ သွေးနဲ့ ကိုယ်တွင်း အရည်ကနေ တဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါပိုး ပြန့်ပွားခြင်း ရှိသလို၊ ရောဂါကူးစက်နေသည့် မိခင်များ မှ မွေးဖွားလာသည့် ခလေးငယ်များ တွင်လည်း ရောဂါပိုး ကူးစက်ပြန့်ပွားစေခြင်း၊ (Birth to an HCV-infected mother, sex with infected partner, injecting drug use and other shared drug paraphernalia)
 ၄) အဟာရချို့တဲ့ခြင်း (သို့) အဟာရ ပြည့် ၀စေသည့် အစားအစာများ ကို လုံလောက်စွာ မစားသုံးခြင်း၊ (Not eating enough nutritious foods –malnutrition)
 ၅) အဆိပ်သင့် အစားအစာ (သို့) ဓာတုဗေဒ အဆိပ်သင့်နေသည့် အစားအစာများ စားသုံးခြင်း၊ အသည်းကို ပျက်စီးစေသည့် ဆေးဝါးများ မှီဝဲခြင်း တို့ ဖြစ်တယ်။ (Eating poisonous wild mushrooms or takingacombination of medicines that do not interact properly can damage the liver and lead to liver disease. If caught early enough,aplan of action can be implemented to prevent further damage. Therefore, it’s important to contact your doctor if your body shows signs of liver damage.
ဒီထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသည့် အချက်က အမေရိကန် အရက်သောက်သုံးသည့် သူများ အရက်နာကျလျှင် Tylenol အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ကို သုံးစွဲခြင်း မှ သည် အသည်းကင်ဆာဖြစ်မှု ပိုမိုများပြားလာနေ တယ်လို့ အမေရိကန် အသည်းကင်ဆာ တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ကြီးက ဆိုထားတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ တွင် အသည်းပျက်စီးမှု ကို လူငယ်များတွင် အများဆုံးတွေ့ရှိရပြီး၊ အရက်သောက်ပြီး၊ Tylenol အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး မသောက်ရန် လူငယ်များကို သတိပေး တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှု ပြုထားတယ်။
မြန်မာ နှင့် စီပိုး
၁၉၈၀ ပတ်ဝန်းကျင်ကာ လ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အ၀ှန်း မှာ အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး နဲ့ သေဆုံးမှု ၊ စီပိုး ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနေမှု အကြီး အအကျယ် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ သို့သော် ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနေမှုကို အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း အစိုးရ လက်ထပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန က လူထု ကျန်းမာရေး အတွက် အရေးပေါ် အခြေအနေ မကျေညာ ခဲ့ပဲ ၊သတင်း အချက်အလက်များကို လည်း ဖုန်းကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံတော် အဆင့် အဖြစ် နိုင်ငံ အ၀ှန်း စီမံချက်ချကာ ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး နှင့် ကြိုတင် ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်တွေ ကို လည်း မချမှတ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ယင်းကာလ မှစ၍ အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုးကြောင့် တချို့ မှာ သေဆုံးခြင်း၊ တချို့ မှာ ကူးစက်ရောဂါ များ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ငုတ်လျှိုသွားခြင်း၊ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စီပိုး ကူးစက်ရောဂါ ဆက်လက် ပြန်နှံ့နေခြင်း များ ရှိခဲ့တယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ၁၉၆၀-၁၉၈၀ ကြားမှာ မွေးဖွားသည့် သူများ အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကူးစက်ခံရမှု အန္တရာယ်များ တာကြောင့် သွေးစစ် စမ်းသပ်မှု ခံယူကြဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ လူထု ကျန်းမာရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု အငြိမ်းစား ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖြူဖြူစိုး က တိုက်တွန်းအကြံပြုခဲ့သလို ၊ ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ် ရေး သုတေသနပြုနေကြသည့် ပြည်ပရောက် မြန်မာဆရာဝန်ကြီးများ၊ ဆေးပညာရှင်များ က လည်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ မှာတော့ အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကူးစက်နေသူ ဦးရေ နှုန်းထား အတွက် အစိုးရဆက်တိုင်း က စနစ်တကျ သုတေသန စစ်တမ်း ပြုလုပ်ထားမှု မရှိခဲ့သဖြင့် မှန်ကန်သည့် အချက်အလက် များ ရရှိဖို့ရန် နှင့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရန် ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒီရောဂါပိုး ကူးစပ်မှု များတဲ့ နိုင်ငံ တနိုင်ငံ အဖြစ် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နှင့် အမေရိကန် ဗဟို ရောဂါထိမ်းချုပ်မှု နှင့် ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့- CDC (Centers for Disease Control and Prevention) က သတ်မှတ် ထားပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် အစိုးရ မဟုတ်သည့် အသည်းရောဂါ စောင့်ကြည့်ရေး အသင်း ရဲ့ ဆန်းစစ်လေ့လာချက် အရ လူဦးရေ ရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းက နေ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကြားရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတယ်။ ဆိုလိုတာ က လူဦးရေ ၁ သန်း က နေ ၃ သန်းနီးပါး အကြား အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကူးစက်နေတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတယ်။ သုတေသန ဆန်းစစ်လေ့လာ မှု ပြုလုပ်လို့ မရတဲ့ ဝေးလံတဲ့ ဒေသတွေ မှာ အချက်အလက်တွေ ရရှိဖို့ ခက်ခဲတာမို့ ၊တကယ့်လက်တွေ့ မှာ အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကူးစက်နေသူ ဦးရေ ဟာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတာတဲ့ ဦးရေထက် ပိုများနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ ဒါဟာ အင်မတန် မှ ကြောက်မတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ နှုန်းထားဖြစ်နေတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ အသည်းကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု ဘာကြောင့် အမြင့်ဆုံး တိုးပွားလာနေသလဲ? ။ မြန်မာနိုင်ငံ လူထု ကျန်းမာရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု အငြိမ်းစား ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖြူဖြူစိုး က အခုလို လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ထားတယ်။
၁) အလုပ်လက်မဲ့ နှင့် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကြောင့် အရက်သောက်သုံးမှု တိုးပွားလာနေခြင်း၊
၂) မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှုများ မှတဆင့် ကူးစက်ခြင်း။ ( Exposure to others’ blood through shared needles or drug paraphernalia (even many years ago and even if it was only once) may be the source of hepatitis C infection.)
၃) အဟာရချို့တဲ့ခြင်း နှင့် အဆိပ်သင့်သည့် အစားအစာများ စားသုံးနေရခြင်း၊ (Not eating enough nutritious foods –malnutrition and Eating poisonous foods)
၄) အကျဉ်းထောင် များ ၊ဆေးရုံများ၊ အလုပ်ရုံများ၊ အားကစားရုံများ တွင် ထိတွေ့မှုများ နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုများ မှ တဆင့် ကူးစက်ခြင်း အပြင် ၊ တက်တိုး ထိုးခြင်း၊ သွေးလှူခြင်း၊ ဆေးထိုးအပ်များ မှတဆင့် လည်း ကူးစက်မှု တိုးများနေခြင်းများ ကို တွေ့ရသည်။
• Blood transfusion, blood products (plasma, immune globulin, platelets, etc.) or organ transplant from infected donor.
• Exposure to infected blood through occupation, manicures, pedicures, piercings, tattoos, sports, sharing personal care items (razors, toothbrushes, etc.)
• Unsterile medical injections or poorly sterilized medical equipment
Although most medical facilities go to great lengths to be sure all equipment is sterilized, there have been reported cases of hepatitis C traced back to the use of reused or incompletely sterilized medical equipment.
၄) စီပိုး ရောဂါကူးစက်နေသည့် မိခင်များ မှ မွေးဖွားလာသောခလေးငယ်များ တွင်လည်း ကူးစက် ရောဂါပိုး ပြန့်ပွားခြင်း၊ (Birth to an HCV-infected mother)
၅) လိင် ဆက်ဆံခြင်း (sex with infected partner)၊ သွေးနဲ့ ကိုယ်တွင်း အရည်ကနေ တဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါပိုး ပြန့်ပွားခြင်း၊
၆) အစိုးရ မှ ထိရောက်စွာ တိုက်ဖျက်သည့် အစီအစဉ်၊ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ် နှင့် ပညာပေးမှု အားနည်းခြင်း
ဒီအချက်တွေ ကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င်၊ နိုင်ငံတကာ က သုတေသနပြုထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေ ထဲမှာလည်း တွေ့ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ကူးစက်မှု အပေါ် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသည့် အချက်က လုပ်ငန်းခွင် နှင့် ဆေးရုံများမှ တဆင့် ကူးစက်လာခြင်း၊ အကျဉ်းထောင်ချခံခဲ့ ရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်သားများ၊ အကျဉ်းထောင် မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာချိန် တွင် စီးပိုးများ ကူးစက်မှု ပိုမိုများပြားသည့် အထောက်အထားများ ခိုင်လုံစွာ တွေ့ရှိနေရတယ်။ ဒါကြောင့် အကျဉ်းထောင်တွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်တွေ နှင့် ဆေးရုံတွေ ဟာ အင်မတန် မှ ကြောက်စရာ ကောင်းသည့် ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွား စေသည့် ပင်မ အရင်းအမြစ် တခုလိုဖြစ်နေတယ်။
အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကို ဘယ်လို တိုက်ဖျက်ကြမလဲ?။
လူထု ကျန်းမာရေး စောက်ရှောက်မှု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖြူဖြူစိုး က အခု လို အကြံပြုထားတာတွေ့ရတယ်။
1) (Diagnosis)- အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး နှင့် အသည်း ပျက်စီးမှု ရှိမရှိ ကြိုတင် သိရှိစေရန် Liver Blood Test ၊ Liver Function Test သွေးစစ်ဖို့ နှင့် ကူးစက် ရောဂါ အချက်ပြသင်္ကေတ တွေ ကို အစဉ်အမြဲ သတိပြုကြပါ။
2) (Treatment)- အသည်းရောဂါ ဆရာဝန်ကြီးများ ရဲ့ လမ်းညွှန်မှု အတိုင်း သာ ဆေးဝါးကုသမှု ကို ခံယူပါ။
3) ( Support)- အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကို တနိုင်ငံ လုံ အတိုင်းအတာ ဖြင့် အစိုးရ မှ ထိရောက်စွာ တိုက်ဖျက်သည့် အစီအစဉ်များ ၊ ပညာပေးမှု အစီအစဉ်များ၊ သုတေသန စစ်တမ်းများ ကောက်ခံမှုများ ကို စနစ်တကျ ထိရောက်စွာ ပြုလုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ အဆိုပြုထားတယ်။
အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကို တိုက်ဖျက်ရာ မှာ လူထု ကျန်းမာရေး အကျိုး ကို ရှေ့ရှု့ ပြီး-
၁) ဈေးကွက်တွင် လူထု အား အဆိပ်သင့်သည့် အစားအစာများ ရောင်းချနေခြင်း ကို အလျင်အမြန် တားမြစ်ပိတ်ပင် အရေးယူသင့်တယ်။
၂) လုပ်ငန်းခွင်များ၊ဆေးရုံများ၊အကျဉ်ထောင်များ တွင် အသည်းရောင် အသားဝါ စီပိုး ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိရန် ထိမ်းချုပ်သည့် အစီအစဉ်များ၊ ကာကွယ်ရေး ပညာပေးသည့် အစီအစဉ်များ ထားရှိသင့်သည်။
၃) လူနေမှု ပုံစံ ( Life Style) ကို ပြောင်းလဲစေသည့် ပညာပေး အစီအစဉ် များကို ဆောင်ရွက် ခြင်း။
ဥပမာ- အရက် အလွန်အကျွံ သောက်မှု အလေ့အထ၊ သန့်စင်သော ရေ ကို သောက်သုံးမှုနည်းပါးနေခြင်း အလေ့အထ၊ အစားအသောက်များ၌ ဆီများ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲ ချက်ပြုတ် ခြင်း အလေ့အထ တွေ ကို ပြောင်းလဲဖို့ လိုတယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
(ဒီဆောင်ပါးကို အသည်းကင်ဆာ ရောဂါ နှင့် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားသော ချစ်သူငယ်ချင်း သာကျော်မောင် အတွက် ရည်စူး၍ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ဆောင်ပါးတွင် The American Liver Foundation, CDC- Centers for Disease Control and Prevention , နှင့် National Medical Association မှ အချက်အလက်များ ကို ကိုးကား ဖော်ပြထားသည်။)
Interview with Dr Phyu Phyu Soe
အမေရိကန် ဗဟို ရောဂါထိမ်းချုပ်မှု နှင့် ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့- CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
Hepatitis C Statistics, National Medical Association
Hepatitis C by the Numbers: Facts, Stats, & You
Hepatitis research to be conducted nationwide in February
Posted by Burma Golf Club at 12:44 AM0comments Links to this post